Fomba 3 Kasain’ny Governemanta Rosiana Handaminana Ny Web · Global Voices teny Malagasy
Fomba 3 Kasain'ny Governemanta Rosiana Handaminana Ny Web
Voadika ny 07 Jona 2014 5:18 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Deutsch, русский, srpski, English
Manantena ny ho tafiditra manontolo amin'ny tambajotra sosialy sy ny tolo-draharaha an-tserasera ve ny manampahefana rosiana? Saru namboarin'ny mpanoratra.
Misy lalàna vaovao hihatra manomboka ny 1 Aogositra 2014 ho avy izao, izay mitaky amin'ny haba-tranonkala sy ny tolo-draharaha an-tserasera maro dia maro hisoratra anarana ho ara-dalàna amin'ny governemanta. Manana andraikitra hitahiry ny tahirin-kevitry (rakitra) ny mpiserasera nandritra ny enimbolana farany any amin'ireo lohamilina miorina ao Rosia ireo habaka sy fampiharana mamela ny mpiserasera hifandray amin'ny hafa, mba hahatonga ny rakitra ho azo jerena ho fampiharana ny lalàna rosiana. Maro ireo sampan-draharaham-panjakana no eo am-pandrafetana ny naotim-panjakana hamaritana ny fomba hampiharan'ny manampahefana tokoa ity lalàna vaovao momba ny aterineto ity.
Ireo naotim-panjakana efatra no lasa lohateniny gazety rosiana androany. Ankoatra izany, namoaka ny lahatsoratra iray manontolo ny vavahadin-tserasera Habrahabr.ru
Ahitana teboka telo lehibe ireo naoty ireo:
1. Ao amin'izao tontolo izao tsy misy Tron, tsy misy miady ho an'ny mpiserasera any Rosia.
Takiana hitahiry ny karazana votoaty rehetra momba ny mpisera ao aminy (tenimiafina, adiresy mailaka, lisitry ny mpifanerasera, izay fiovana rehetra ao amin'ny kaontin'ilay mpiserasera, lisitry ny lohamilina DNS rehetra nidirana, sns…) ireo Haba-tranonkala sy ireo fampiharana. Na izany aza dia tsy mila tehirizina ireo votoantin-kafatra ifanakalozana an-tserasera. (Raha manoratra amin'ny namanao ao amin'ny Facebook ianao hoe “Miala i Putin!”, ny hitan'ny polisy rosiana dia hoe nandefa hafatra tamin'ny namanao ao amin'ny Facebook ianao – fa tsy hitany ny ompa ataonao amin'i Kremlin.)
2. Mitandrina i Kremlin ka avelany hatory ny alika.
Ny habaka na tolo-draharaha miorina noho ny “filàna manokana, ara-pianakaviana na ny ao an-tokantrano dia tsy ahàtra aminy ny lalàna, na dia tsy ampiharana izany fanavahana izany aza ny fifanakalozam-baovao manana endrika “politika na resaham-bahoaka” na ireo resaka tsy voafetra ny isan'ny mpandray anjara ao aminy. Tsy ampiharana ny lalàna ihany koa ny varotra an-tserasera, ny raharaha siantifika sy fanabeazana, ary ny zavatra tahaka ny fitadiavan'asa. Nananihany tamin'ireo maningana rehetra ireo i Sultan Suleimanov ao amin'ny TJournal fa ireo tranga mannigana rehetra ireo dia “ho an'ny rehetra ankoatra an'i Navalny” (ilay blaogera miady amin'ny kolikoly malaza indrindra ao amin'ny firenena), mahatsikaritra fa lasa mitandrina ny manampahefana rosiana tsy hanelingelina ireo mpisera aterineto tsy miresaka politika.
3. Misy “fivakisana” ahafahan'ny governemanta miditra tanteraka amin'ny votoatin-tranonkala.
Farany, hanolotra fahafahana miala amin'ny tinakim-pitahirizana tahirinkevitra (votoaty) amin'ny haba-tanonkala sy ny fampiharana ny Sampan-draharaham-Piarovana Federaly Rosiana (ilay mitovy amin'ny FBI Amerikana), raha avela mitsofoka tanteraka, eo noho eo, amin'ny tahirin-kevitr'izy ireo ny governemanta. Amin'izay fotoana izao, dia tafiditra tsy misy sakatsakana amin'ny tahirin-kevitry ny mpisera aterineto ny polisy rosiana, ka ny manampahefana no hitahiry azy. Araka ny loharanom-baovao ao anatin'ny Minisiteran'ny Atitany, tsy manana ny fitaovana ampy hitahirizana ireo angona (tahirin-kevitra) ireo ny fanjakana. (Raha lazaina amin'ny teny hafa dia mila ampiana ny famatsiam-bola.)
Ity teboka fahatelo ity no mety hanaporofo ny mampanitikitika ny loha indrindra eo amin'ny fampiharana ny lalàna vaovaon'ny aterineto rosiana. Firy ny haba-tranonkala sy fampiharana hanapa-kevitra ny hisokatra manontolo amin'ny governemanta, mba hialan'izy ireo amin'ny fanelingelenana sy ny fifantenana sy fitehirizana ny tahirin-kevitry ny mpiserasera araka ny lalàna vaovao? Mitsatoka ve i Kremlin fa ho afa-miditra tanteraka ao amin'ny RuNet amin'ny fanomezana io “fivakisana” io? Sa fikafika ataon'ny polisy federaly hitsihifana ny tetibolam-panjakana mba hahazoana famatsiam-bola fanampiny, mamorina filàna vaovao handrobàna?
Mazava loatra fa tsy voatery tsy misy ifampidirany ny kolikoly sy ny sivanae. Fantatsika izao i Alexey Navalny, izay, nandany ny telovolana farany tsy mahazo mivoaka ny trano nametrahana azy sy voarara tsy hahazo hiserasera amin'ny aterineto, fa nahazo izany tao anatin'ny mafaika.